गतबर्ष २७.७६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको शिखर इन्स्योरेन्सको कस्तो छ वित्तिय अवस्था ? - Arthasansar
गतबर्ष २७.७६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको शिखर इन्स्योरेन्सको कस्तो छ वित्तिय अवस्था ?
विहीबार, ३० बैशाख २०७८, ०७ : ०८ मा प्रकाशित
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले ३६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १०.२६ प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले ३२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो आम्दानी १४.०३ प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्षको सोहि अवधिसम्म कम्पनीको यस्तो आम्दानी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सीमित थियो ।
हाल चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ६१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, इन्स्योरेन्स कोषमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र महाबिपत्ति जगेडामा ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीको खुद मुनाफामा बृद्धिभएपनि प्रतिसेयर आम्दानीमा भने गिरावट आएको छ । गत बर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ४१ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेकोमा अहिले त्यो घटेर २७ रुपैया ५५ पैसा पुगेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २१० रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ ।